Vaovao - Fomba fiasa momba ny milina sy ny fitaovana vita amin'ny hazo
1. Ny mpandraharaha ny fitaovana, dia tsy maintsy ampiofanin'ny paositra, aorian'ny fizahana ny fanadinana, alohan'ny hahafahan'izy ireo miasa tsy miankina.
2. Ny mpandraharaha milina dia tsy maintsy mahafantatra ny teknolojia, ny fahombiazany, ny firafitry ny fitaovana ao anatiny, ny fomba fiasa, ny fikojakojana ary ny fikirakirana ireo lesoka tsotra. Hampiasa dia hampiasa, hanamarina, hitazona, ary hivaha olana.
3. Aorian'ny fisotroana, ny mpiasa saina na marary dia voarara tanteraka amin'ny milina fandidiana, ny mpandraharaha tsy mekanika dia voarara tanteraka tsy hiasa amin'ny sehatry ny milina China Furniture Forum, amin'ny efatra, ny fandidiana, ny toerana tsy maintsy diovina, ny fifantohana dia tokony hifantoka amin'ny, fifohana sigara, ny fihinanana sakafo, ny vazivazy sy ny fanesoesoana, amin'ny asa mekanika, dia tsy tokony hiditra amin'ny fanadiovana mekanika, poti-kazo vita amin'ny China Furniture Forum, China Network Network, Forum momba ny fanaka, Network Network, Forum momba ny fanaka ao an-trano, Office Home five, mpiasa miasa, tokony tsy lavitra ny paositra, mila miala, tsy maintsy manakana ny herinaratra. Tsy mahazo manome milina ho an'ny mpiasa tsy voatondro hiasa.
4. Ny milina sy ny fitaovana dia tokony ho ekipan'ny olona tompon'andraikitra amin'ny fampiasana sy fitantanana, fanarahana henjana ny fomba fikojakojana ny milina sy ny fitaovana, manao asa tsara amin'ny fikojakojana amin'ny ambaratonga rehetra, tokony ho fampiasana araka ny antonony, miasa marina, mitazona milina sy ny fitaovana milamina.
5. Raha ny milina vao napetraka na amin'ny fanamboarana, fanovana na famindran-toerana ary fanesorana ireo fitaovana napetraka indray dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra voarindra momba ny fizahana, ny famantarana sy ny fizahan-toetra aorian'ny fandalovana, alohan'ny hamelana azy hampiasaina, ary tokony mifanaraka tanteraka amin'ny fe-potoana fanamboarana lehibe, salantsalany ary kely ho an'ny fikojakojana ara-potoana, mba hanitarana ny androm-piainana.
6. Ny ampita sy ny fitaovana ampiasain'ny milina sy fitaovana, dia tsy maintsy manana ampinga azo antoka azo antoka, ary tokony hojerena amin'ny fotoana rehetra mba hitazomana azy ho malefaka sy mandaitra.
7. Ny mpandraharaha dia tsy maintsy miakanjo akanjo tsara rehefa miasa, mitafy satroka asa tsara, tsy tokony aseho ny volo lava, ahodin-tanana ny kiho ambony na bokotra.
8. Masinina sy fitaovana elektrika, voarara tanteraka amin'ny fiasan'ny herinaratra ambany na tsy miovaova, fanombohana mekanika, dia tokony hanamarina ny fitaovana elektrika, mba ho marin-toerana sy ho an'ny mpanondro vy mahazatra, alohan'ny asa ofisialy. Ao amin'ny asa, raha ny herinaratra dia hita fa ambany noho ny volan'ny fitaovana, dia tokony hampijanona avy hatrany ny herinaratra avy ao amin'ny China Furniture Forum, ny China Network Network, ny Forum Forum, ny Network Furniture, ny Forum Home Furniture, ny Office Office, ny Home, Fanaka.
9. Miasa, raha sendra tsy fahombiazan'ny herinaratra ianao dia tokony hakatona ny switch herinaratra hisorohana ny antso tonga, mandeha irery ny milina.
10. Voarara mafy ny milina sy ny fitaovana ary ny fiasan'ny "marary" na ny fihoaram-pefy, ny fanesorana dia tokony esorina eo noho eo na amin'ny torohevitra mahefa momba ny fanamboarana.
11. Masinina sy fitaovana miasa, tsy misy fanamboarana, fikojakojana, fanosorana ary asa fanamafisana, toy ny hafanana, tabataba, faritra malalaka na simba ary lesoka hafa, tokony hijanona aloha ary hiala ny herinaratra, aorian'ny fizahana sy fanamboarana.
12. ny fampiasana ny fitaovana, tokony hazoto amin'ny fanamboarana sy fikosoham-bary, tsy hisalasala hampiasa. Ny fametrahana fitaovana dia tsy maintsy apetraka ary alao ny herinaratra alohan'ny handehanany, tsy maintsy apetraka mafy mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny milina, hamafiso ny kofehy, tsy tokony hisy fisehoan-javatra malalaka.
13. Rehefa vita ny asa ary tapaka ny herinaratra dia tsy maintsy diovina, tazonina ary hakatona (hidina) ny vata vavahady.
14. Ny kitapo hoover ao anaty lavenona hazo dia tsy mety feno mihoatra ny 4/5 amin'ny kitapo, mora loatra ka miteraka fahamaizana maotera.
15. Rehefa eo am-panamboarana na fanovana fitaovana ny milina rehetra dia tsy maintsy ahantona ny soratra hoe "Eo am-pametrahana io fitaovana io, voarara tanteraka ny fampiasana".